Ungayirhola njani itanki? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokudweba itanki?
Ungazoba itanki ngeendlela ezahlukeneyo, yitsho kuqikelelo. Ukuba useta isiseko seephiramidi sikhutshiwe ngokungacwangciswanga (okanye lula, iibhokisi zokuzoba) umzekelo, kwaye emva koko uzobe onke amalungu amancinci etanki. Zininzi zazo, kwaye umsebenzi uya kufuna ukukhuthala, umonde kunye nexesha.
Ingqwalaselo eyodwa kufuneka ihlawulwe kwinganono nakwiitrekhi:
Uyidweba njani itanki
Siqala ukudweba itanki ukusuka edome kwaye siye ezantsi.
Emva koko, sidweba ngokweenkcukacha icandelo elingaphezulu leetanki.
Emva koko szoba indawo.
Zoba umkhondo. Kwaye ngaphambili sitsale icandelo elingaphantsi lesikrweqe.
Zoba amavili amaninzi.
Inqanaba lokugqibela: susa imigca eyongezelelweyo kwaye uzobe iipensile ezifanelekileyo. Iziphumo zinje.
Kulula ukuzoba itanki, ngakumbi ukuba ngumdlalo okonwabisayo nomntwana kwaye umzobo wethu awenzi ngathi umsitho wokhuphiswano kwisangqa sobugcisa. Kuqala kufuneka uzobe isixhobo seetanki esinee-tracks, isiseko kunye nenqaba ebizwa ngokuba yeyenqanawa apho iya kubakho khona umpu weetanki. Kwaye ke ukucinga kwethu sele kusebenza. Mhlawumbi le vidiyo inento eluncedo. ikhonkco levidiyo
Ngaphezulu kwacetyiswa ukuzoba itanki ngemilo yoxande, kwaye ndicinga ukuba ibhetele ngokusebenzisa ii-ovals, ngendlela efanayo:
Eyona nto ilukhuni kukuzoba iimbovane, kodwa ndicinga ukuba kukuphela kwe-oval kwenye kunye nedash eyongezelelweyo.
Itanki inokutsalwa ngemilinganiselo eyahlukeneyo yendalo. Ndicebisa ukuzoba itanki emnandi nepholileyo, eya kuhlamba ukuhombisa kunye nomzobo wabantwana, kunye nekhadi lokubulisa. Kuya kubakho umasifundisane omncinci olandelayo:
Kwaye ukuba uthatha indlela ecokisekileyo kwinkqubo yokuzoba itanki, ke kungcono ukuy uyihombisa, njengokomzobo. Uya kuba netanki yeyona kathathu intle yaseMelika. Uthuli olusuka phantsi kwamavili luyenza lube lolokwenyani!
Eyona itanki ilula inokutsalwa njengoko kubonisiwe. Ukwenza oku, kuya kufuneka uqale uzobe i-hull ye-tank, emva koko ndiza kuya kwi-grove, emva koko yonke into iya kujongeka ngathi, ngaba aba bahluli. Ewe, zoba umpu. Konke kuyakwenzeka nini Zoba eyona nto ibaluleke kakhulu, emva koko unokuqala ukuhombisa itanki. Unokukhetha umbala wetanki ngokwakho, akuyimfuneko ukuba i-tan kufuneka ibe njalo ukukhanya okuluhlaza.
Inxalenye engezantsi: imikhondo, umzimba.
Inxalenye ephezulu: inqaba, umpu wemipu, itanki yamafutha.
Xa kutsalwa ingqalelo kufuneka ihlawulwe kulungelelwaniso lwezinto, kuba itanki eliqingqiweyo linomhlaba ocacileyo kunye nomphetho ovaliweyo, ukuphawuleka kolungelelwaniso kuyabonakala kakhulu.
Ividiyo ibonisa inkqubo yokuzoba itanki elula.
ukuzoba itanki, okanye enye into ayinzima kwaphela, ukuba uzoba ngokwamanqanaba usebenzisa incwadi yemigaqo. Ukwenza oku, udinga ipensile kuphela, iphepha kunye nepeni, imigca yokuhlamba. Ukwenza isampula yendlela yokuzoba itanki ngokwamanqanaba, ungasebenzisa umzekelo, umzekelo:
Imibuzo ye-58 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,231.